युएईले किन गर्यो हप्ताको साढे चार दिन काम गर्ने निर्णय, जान्नुहोस् अन्य देशमा कस्तो छ प्रणाली ?
युएई : युएई ४ र आधा दिन काम हप्ता : संयुक्त अरब इमि’रेट्समा साताको साढे ४ दिन काम गर्ने नियम जनवरी १ बाट सुरु हुने भएको छ । यसरी युएई यस्तो अ’नौठो नियम लागु हुने विश्वको पहिलो देश बन्नेछ ।
भारतमा काम गर्नेहरूले5दिन हप्ता मात्र कल्पना गर्न सक्छन्। अ’र्थात् ५ दिन काम र दुई दिन आ’राम, तर योभन्दा माथि बढ्दै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले नयाँ सुरुवात गरेको छ । अब युएईमा डेढ साताभित्र काम गर्नुपर्ने यो निर्णयले मानिसको काम र जीवनबीच सन्तु’लन कायम गर्ने युएईबाट विज्ञप्ति आएको छ ।
संयुक्त अरब इमि’रेट्समा साताको साढे ४ दिन काम गर्ने नियम जनवरी १ बाट सुरु हुने भएको छ । यसरी युएई यस्तो अ’नौठो नियम लागु हुने विश्वको पहिलो देश बन्नेछ । यसअन्तर्गत युएईमा सरकारी कर्मचारीले शुक्रबार आधा दिन काम गर्नेछन् ।
जुन परम्प’रागत रूपमा मु’स्लिम धर्ममा विश्वास गर्नेहरूका लागि पर्वको रूपमा रहन्छ। यस्तो अवस्थामा युएईका निजी उद्योग र विद्यालयले यो नियम पालना गर्ने कि गर्दैनन्, त्यो पनि हेर्नु महत्व’पूर्ण हुनेछ ।
तर, सन् २००६ मा युएईमा शनिबारदेखि बुधबार हप्ता सुरु भएको बेला उनले त्यो नियम पालना गरे । जसलाई इ’स्लामिक कार्य सप्ताह मानिन्छ, यस्तो व्यवस्था इरान र अफगा’निस्तानमा लागू हुन्छ।
के भन्यो इमि’रेट्स सरकारले ? संयुक्त अरब इमिरेट्स सरकारले आफ्नो कदमको प्रशंसा गर्दै युएई विश्वका ती देशमध्ये एक भएको बताएको छ । जहाँ राष्ट्रिय कार्य सप्ताह सुरु भएको छ । आफ्नो विज्ञप्तिमा, इमि’रेट्स सरकारले भनेको छ कि यसले रोजगारीमा रहेका मानिसहरूको घरमा र उनीहरूबीचको जीवनमा स’द्भाव ल्याउनेछ। यसले मानिसहरूलाई पनि खुसी बनाउनेछ र तिनीहरूले आफ्नो काम गर्न थप झु’काव महसुस गर्नेछन्।
कुन देशमा गत महिना बेलायतमा पनि ४ दिनको कार्य सप्ताह सुरु भएको छ । यो UK मा एटम बैंक द्वारा सुरु भएको थियो। एटम बैंकमा ४३० जना काम गर्छन् । न्युजि’ल्यान्डमा पर्पेचुअल गा’र्डियन नामको फर्म छ, त्यसले पनि ४ दिनदेखि काम लागू गरेको छ । ४ दिने कार्य हप्ता सन् २००९ मा अमेरिकाको उटाहमा सुरु भएको थियो ।
यद्यपि, यो सेप्टेम्बर 2011 मा बन्द भयो। स्वीडेनमा त्यहाँको सरकारले दिनमा ६ घण्टा काम गरे’बापत ८ घण्टा पैसा तिर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्वीडेन सरकारले यो प्रणाली अलि महँगो भएको स्वी’कार गरे पनि यसले जनताको उत्पा’दकत्व पनि बढाएको स्वी’कार गरेको छ ।
फ्रान्समा काम गर्ने मानिसका लागि तोकिएको समयपछि कुनै पनि काम गर्न नपाइने कानुन बनाइएको थियो । फ्रान्समा, कार्य हप्तामा मात्र 35 घण्टा काम आवश्यक छ। केपीएमजीले अमेरिकामा आफ्ना कर्मचा’रीहरूका लागि ४ दिने कार्य सप्ताह सुरु गरेको छ। 2016 मा, Amazon ले पाइलट प्रो’जेक्ट अन्तर्गत हप्तामा 30 घण्टा काम सुनि’श्चित गरेको थियो।
२०७८ मंसिर २३, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 76 Views